Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya oo kulamo la Qaatay Qaar kamid ah Wasiirada Maaliyadda dalalka Carabta[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya oo kulamo la Qaatay Qaar kamid ah Wasiirada Maaliyadda dalalka Carabta[Sawirro]
Wasiirka Maaliyadda ee DFS, Mudane Maxamed Aadan Ibraahim (Farkeeti), oo dalka Kuwait uga qayb galayay shirka sanadlaha ah ee hay’adaha Maaliyadda wadamada Carabta, ayaa kulamo gaar gaar ah la yeeshay qaar ka mid ah Wasiirada Maaliyadda Wadamada Carabta, isagoo kala hadlay xoojinta iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo Wadamada Carabta.
Wasiirka Maaliyadda Kuwait oo ka mid ahaa Mas’uuliyiinta Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya la kulmay, ayaa dhankiisa balan qaaday in uu ku dadaali doono sidii loo fulin lahaa balan qaadayadaas, wuxuuna muujiyay in Soomaaliya ay mudan tahay in la garab istaago lana xoojiyo iskaashiga ay la leedahay wadamada Carabta.
Sidoo kale Wasiirka Maaliyadda ee Jazaa’ir ayaa isna dhankiisa muujiyay rajo wanaagsan oo ku aadan fulinta balanqaadyadaas.
Tartaanka oo ay ka qayb-qaateen ilaa iyo 60 Dal ayaa waxaa nasiib u yeesha Cabdirisaaq Cabdulaahi oo ah wiil Soomaaliyeed in uu kaalin kowaad noqdo taas oo aad uga farxisay Mas’uuliyiintii ku sugnayd Dalka Kuwait.
Wasiirka Maaliyadda ee Soomaaliya ayaa Shahaado Sharafta gudoonsiyay Wiilka kaalinta kowaad galay ee Cabdirasaaq.